Tag: aprimo | Martech Zone
Aprimo naADAM: Dhijitari Asset Management yeiyo Rwendo rweVatengi
Chipiri, August 22, 2017 Chitatu, Nyamavhuvhu 23, 2017 Douglas Karr
Aprimo, yekushambadzira mashandiro chikuva, akazivisa kuwedzerwa kweADAM Dhijitari Asset Management software kune yayo yegore-yakavakirwa zvipo. Ipuratifomu yave ichizivikanwa semutungamiriri muThe Forrester Wave ™: Dhijitari Asset Management YeVatengi Zvakaitika, Q3 2016, ichipa zvinotevera: Seamless ecosystem kusangana kuburikidza neAprimo Integration Sisitimu - Mhando dzinogona kuwana kutaridzika kuri nani uye zvakanyanya kusunama kubatana mune yekushambadzira ecosystem iine mabhenefiti akawedzerwa eiyo Aprimo yakavhurika uye inochinja sisitimu yekubatanidza mukati megore. Kuchinja kwekushambadzira
Kushanda Kwekushambadzira Software: Makiyi Vatambi uye Kuwanikwa
Anopfuura mabhizimusi zana nemakumi mana nemaviri achishandisa kushambadzira otomatiki software Zvikonzero zvepamusoro zvitatu ndezvekuwedzera zvinotungamira, kuwedzera kugadzirwa kwekutengesa, uye kudzikisira kwekushambadzira pamusoro. Iyo yekushambadzira michina indasitiri yakura kubva pamadhora mazana maviri nemakumi maviri nemashanu kusvika pamadhora mazana mapfumbamwe nemazana mashanu emadhora mumakore mashanu apfuura Izvi zvinotevera infographic kubva kuMarketation Automation Insider inoratidzira shanduko yekushambadzira automation software kubva kuUica pamusoro pemakore gumi apfuura kuburikidza ne $ 142,000 bhiriyoni yekutenga iyo yakatiunza ku
Aprimo: Kushambadzira Tech Vhidhiyo
China, January 27, 2011 China, June 18, 2015 Douglas Karr
Tiri kufara kwazvo kutanga chirongwa chitsva padhuze neKushambadzira Technology Nhau uye Kushambadzira Technology Radio Ratidza… tiri kuvhurawo Marketing Technology Vhidhiyo nhevedzano! Yakagadzirirwa uye yakaburitswa ne12 Stars Media, iwo akateedzana anokuzivisa iwe kumakambani anotungamira ezvekushambadzira uye nevanhu vari kumashure kwezvigadzirwa nemasevhisi! Yekutanga mune edu akateedzana ndiAprimo, kambani yekushambadzira ine hunyanzvi hwezvishandiso zvevatengesi. Muno muIndianapolis, isu tine
Aprimo: Zvakanyanya Maturu Ekubatanidza Kushambadzira
Chitatu, November 3, 2010 NeChishanu, Kurume 11, 2016 Douglas Karr
Gore rino, tiri kuona kumwe kufambira mberi kunoshamisa mumashandisirwo emushandisi evashambadzi. Gore rakapera ndakasangana nechikwata chehutungamiriri kuAprimo mushure mekutaura naHaresh Gangwani, VP weProduct Strategy. Iyo kambani yanga ichangobva kuchinjisa magiya uye ndokutanga kupa Software seSevhisi "Studio" vhezheni. Ini ndakaziviswawo ndikasangana nemukuru wavo CEO Bill Godfrey pakureba. Yakanga iri hurukuro inoshamisa pamusoro peKushambadzira Shanduko… uye ini zvinosuruvarisa ndakaita a
PHP: Mazuva mangani kusvika Kisimusi?
Chipiri, Mbudzi 6, 2007 Svondo, October 4, 2015 Douglas Karr
Tine mutengi ane chakakosha icho chakangonaka chete kusvika Kisimusi uye marongero emazuva kusvika kupera kupera kuri mumunda wakachengetwa mudhatabhesi. Ini ndaida kunyora cron basa (rakarongwa basa) rino gadziridza munda kune yega yega maresitorendi pahusiku hwese. Ndakanga ndisati ndambonyora chero cron mabasa pamberi - nekuda kweangu wandaishanda naye, Tim, kuImavex nekunditungamira munzira kwayo.